Paarlaamaan labsii Yeroo Muddamaa raggaasise. Maaltu itti aana? - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Paarlaamaan labsii Yeroo Muddamaa raggaasise. Maaltu itti aana?
Paarlaamaan labsii Yeroo Muddamaa raggaasise. Maaltu itti aana?
Labsiin Yeroo Muddamaa ragga’eera. Baay’ee nama aarsa. Hedduu mataa nama dhukkubsa. Diinni qabsoo kana nu harkatti qancarsuuf tooftaa hundatti dhimma bayaa jiru kana godhuun isaa ammoo heddus nama hin raaju. Kan biraa maaltu isaan irraa eegama? LYM darbeera. Kallattiin xiyyeeffannaa kana boodaa hawwiin Komaand Poostii akka eebjuu ta’u godhuudha. Kanaaf tooftaa keenna qaruun dirqama yeroon gaafatu.
Qabsoon kuni imala fagoo deemee, bu’i-bayii heddu keessa darbe, gatiin guddaan itti kaffalamee as gaye. Labsii Yeroo Muddamaa kanaan waan qancaruu miti. Gatii dabalataa, tarii waa cufti osoo bilchina siyaasaa sadarkaa ol’aanaan geggeeffame ta’ee hanbisuun danda’amu, nu kaffalchiisuun isaa hin oolu. Amma, erga bakka amma jirru kanatti uf arginee, imala gara bilisummaatti godhamu saffisiisuuf, gatii LYM nu kaffalchiisuu malus hir’isuuf, ammas labsii kana Oromiyaa keessatti hiddaa dhabsiisuuf tooftaa fi bilchina siyaasaa sadarkaa ol’aanaan itti deemuun dirqama ta’a.
OPDO’n Labsii Yeroo Muddamaa kanaaf sagalee laatte dogoggora seenaa hojjatteerti. Garuu, miseensonni paarlaamaa 95 LYM kana mormaniiru. Hedduun isaanii Oromoo taa’uun shakkii hin qabu. Kuni waan guddaadha. Woggaa tokko dura wanti akkanaa hin yaadamu. Kuni injifannoo qabsoo Oromooti. Paarlaamaa Woyyaaneen woggaa 27 keessatti sirbaa turte keessatti namni hangasii kan ummataa fi haqaaf dhaabatu jiraachuun isaa waan abdii namaaf laatu. Hunda worra LYM mormee sabaa fi haqaaf dhaabate galatoomaa jenna.
OPDO’n bakka lama jirti: garee ol’aantummaa TPLF tiksuuf dadhabuu fi worra aantummaa sabaa qabu. Worri aantummaa sabaa qaban, ammatti laakkofsaan caalamanis, ijjannoo isaanii paarlaamaa keessattis osoo hin hafin ifa godhaniiru. gareen aantummaa sabaa qabu kuni qabsoon gara funduraatti geggeessinuuf hedduu barbaachisaadha. Yoo hunda dogoggora wolfakkaataa hojjataa jiraachuu hin qabnu. Dallansuu fi miiraan masakamaa siyaasni geggeesan tabba hin bayu. Miseensota OPDO hunda mooyyee tokkotti naqnee shigiduun qabsoo tana yoo qancarse malee saffisiisuu hin danda’u. Tooftaan sirriin, miiraan osoo hin taane tooftaa fi tarsiimoon qabsoo geggeesina yoo ta’e, OPDO aantummaa sabaa qabdu inumaa kan durii caalaa jajjabeessuu, qaama qabsoo kanaa akka ta’aniitti dhaadhessuu qabna. Komaand Poostii laamshessuun kan danda’amu yoo inni alaa fi keessaa quba wolqabaataa socho’ee dha. Kanaan OPDO’n aantummaa sabaa qaban kan nu barbaachisaniif. Ammoo, Iija kittillayyoota jaamsuun dirqama. Worra aantummaa sabaa qaban qaanessaa, kittillayyootaan wol isaan qixxeessaa qabsoo tanaaf fira horuun salphaa hin ta’u.
Barreessituu karaa [email protected] qunnamuu dandeettan.
Previous articleLabsiin Yeroo Muddamaa qabsoo nu harkatti qancarsuu fi injifannoo dhiigaan argamte nu harkaa baasuu hin qabu
Next articleDogoggorri tooftaa raawwatamaa jiru gatii qaalii akka nu hin kaffalchiisne sodaatama